IRama Refugio Cañadón
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMatias
IRama Refugio yiprojekthi ebekwe eOceania del Polonio, indawo yasendle ejikeleze ikhabhathi phakathi kwepayini kunye ne-acacias, ulwandle lukumgama oziimitha ezingama-200 kuphela, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphuma kutshintsho, ukuqhawula kwaye uzibandakanye ekuphumleni komzimba nengqondo. . Ebusuku, ngenxa yongcoliseko lokukhanya okuphantsi, unokukonwabela isibhakabhaka esineenkwenkwezi okanye ukukhanya kwenyanga okukhulu.
Ulwandle olungenasiphelo olujikelezwe ziindunduma lusinika indawo engenakubethwa yohambo olude kunye nekhefu elangeni.
Ikhabhinethi yethu eyakhiwe ngeentlobo ezahlukeneyo zokhuni, kwi-gully ejikelezwe yimithi yepineyini inika umbono omhle wehlathi. Yenzelwe izibini ezitshatileyo, inabo bonke ubumnandi bokuchitha iholide yokuphumla. Le ndlu ikwindawo ekwabelwana ngayo nezinye izindlu ezimbini ezakhiwe ngocoselelo, ziqinisekisa ukuba ngasese kwindlu nganye.
Indawo enabemi abambalwa, emabhodlo kwaye phantse engaziwayo yolwandle i-oceania del Polonio ibekwe kwindawo yonxweme yaseRochense ebhengezwe njengeNdawo yeLifa leMbali yiUNESCO. Ezinye iikhabhinethi, i-inn encinci, ihlathi le-eucalyptus kunye nemithi yepineyini kunye nolwandle oluvulekileyo elwandle lushwankathela i-topography yale ndawo.
Ukuba sele uyazi ezinye ii-spas eRoche, unokuzibuza malunga nombane. EOceania kukho amandla ombane, kodwa sekunjalo, iinkwenkwezi zikhazimla ngokungathi usembindini webala.
Ibekwe phakathi kwezona ndawo zokuchithela iiholide iLa Pedrera kunye neCabo Polonio, kwaye iikhilomitha ezilithoba kuphela ukusuka kule yokugqibela. Indlela yomhlaba idibanisa i-Oceania del Polonio kunye nekhilomitha engama-255 yendlela yesizwe yeshumi.
Imisebenzi eOceania del Polonio
Nangona eyona nto inomtsalane kukuzola kwaye abakhenkethi beza kufuna ukuphumla, eOceania del Polonio kukwakho ukuzonwabisa: ukukhwela ihashe, ukuhamba kwamahlathi kunye nokuhamba ngephenyane kwiindawo ezimanzi. Kukwakho nezitovu rhoqo ebusuku, ukuloba kunye neenqwelomoya ezijingayo.
Kwi indawo ungakwazi ukutyelela reserve ingonyama ulwandle kunye Cabo Polonio lighthouse, bawazi yaye indlela le Arroyo Valizas, Laguna de Rocha, hamba-hamba ekhokelwa ngokusebenzisa Ombúes Forest ubudala, yaye uye phambili umganyana, ungatyelela i Fort of Santa Teresa, okanye undwendwele La Paloma, enika zonke iinkonzo zolwandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Matias